အိုင်ပီဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်ကိုမည်သည့်ဒေတာကပေးနိုင်သနည်း။ | Gadget သတင်း
una အိုင်ပီလိပ်စာ ၎င်းသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုသူအများစုအတွက်လုံးဝသတိမပြုမိဘဲရှိနေသော်လည်း၎င်းသည်ပြုလုပ်ထားသောကွန်ယက်များ၏ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုစီ၏အခြေခံနှင့်အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးပြောရမယ် ၎င်းသည်အင်တာနက်ပရိုတိုကော၏အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည့်ထူးခြား။ မပြောနိုင်သည့်နံပါတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ သိုမဟုတ် IP protocol ဟုခေါ်သည့်ကွန်ယက်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောမည်သည့်ကိရိယာမဆို။
နံပါတ်အုပ်စုလေးခုဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းကို 127.0.0.1 ပုံစံတွင်ပြထားသည်။ နံပါတ်အုပ်စုတစ်ခုစီသည် ၀ မှ ၂၅၅ အထိတန်ဖိုးရှိနိုင်ပြီး၊ IP ကိုအမြဲမြင်နိုင်သည်၊ သို့သော်အချို့သောလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရန်တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းကိုဝှက်ထားနိုင်သည်။ သို့သော်၊ မည်သည့်နည်းလမ်းမှမမှားနိုင်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကွန်ယက်ကွန်ယက်အတွင်းပြtroubleနာများမဖြစ်ပွားခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်၊
အိုင်ပီလိပ်စာများသည်အများပြည်သူဖြစ်ပြီးကွန်ယက်ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပံ့ပိုးသူကပေးသည်။ ယခုမှ စ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ IP ကိုမည်သို့သိနိုင်မည်၊ မည်သည့်နိုင်ငံပိုင်ကြောင်းကိုခွဲခြားသိနိုင်မည်၊ ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအခြားအရာများစွာကိုသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
1 အိုင်ပီပုံစံများ၊ အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိက, Fixed နှင့်ပြောင်းလဲနေသော
2 ကျွန်ုပ်၏ IP ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
2.1 iOS ကိရိယာတစ်ခုတွင် IP address ကိုရယူပါ
2.2 Android ဖုန်းတွင် IP address ကိုရယူပါ
4 Geolocator ဆိုတာဘာလဲ။
အိုင်ပီပုံစံများ၊ အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိက, Fixed နှင့်ပြောင်းလဲနေသော
အိုင်ပီနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းပညာနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာများမလုပ်မီကျွန်ုပ်တို့တွင်လေးမျိုးရှိသည်။ အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်များနှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူအသေးစိတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ရှင်းပြမည့်ပုံသေတက်ကြွသောအရာများ -
ပုဂ္ဂလိကအိုင်ပီဖြေ - ဒီအိုင်ပီလိပ်စာအမျိုးအစားဟာကွန်ရက်အတွင်းကကွန်ပျူတာတခုခုကအသုံးပြုတဲ့ IP လိပ်စာဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီကွန်ရက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာတွေအားလုံးကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးတယ်။ local network တစ်ခု၏ IP သည်ထူးခြားနေဆဲဖြစ်သော်လည်းအများပြည်သူသုံးကွန်ယက်၏အခြားသောအိုင်ပီနှင့်တိုက်ဆိုင်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့နှစ်ခုသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မရောနှောသောကြောင့်မည်သည့်ကိစ္စတွင်ရှုပ်ထွေးမည်မဟုတ်ပါ။
အများပြည်သူဆိုင်ရာ IPဤ IP ဆိုသည်မှာကွန်ရက်ပြင်ပရှိအခြားစက်ပစ္စည်းများကိုပြသသော IP ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် IP တူညီမှုမရှိနိုင်ပါ၊ သို့သော်တူညီသော router တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော device တော်တော်များများသည် IP address တူညီကြသည်။
Fixed IP: ဤအိုင်ပီအမျိုးအစားကို၎င်း၏အမည်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာပုံသေဖြစ်ပြီးမည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုကွဲပြားသည်။ static ဟုလည်းလူသိများသောအင်တာနက်ပံ့ပိုးသူများ၏ဆာဗာများကအသုံးပြုသည်။
Dynamic IP: ဤအိုင်ပီလိပ်စာများမှာကွန်ယက်ကွန်ယက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချိတ်ဆက်တိုင်းထပ်ခါတလဲလဲမလုပ်ရသောအရာများဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၌များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်အသုံးပြုသူဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူကအင်တာနက်နှင့်ဆက်သွယ်သည့်အခါတိုင်းမတူညီသော IP ကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်၏ IP ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ IP ကိုသိလိုသည့်စက်ပေါ် မူတည်၍ နည်းလမ်းများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာနိုင်သည်၊ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်မည်သည့်ကွန်ပျူတာ (သို့) စက်ပစ္စည်းအတွက်မဆိုအလွယ်ကူဆုံးနှင့်အသုံးဝင်ဆုံးသည်အောက်ပါသို့သွားရန်ဖြစ်သည် link ကို.
ဤ IP ကိုရေးပါက router တစ်ခုတည်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော devices အားလုံးသည် IP address တစ်ခုတည်းရှိခြင်း (သို့) ၄ င်းသည် local network အတွင်းရှိပုဂ္ဂလိက IP နှင့်အနည်းငယ်သာသက်ဆိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိရသလဲ Android သို့မဟုတ် iOS ဖြင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုသောသုံးစွဲသူများပိုမိုများပြားလာသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်နေရာ၌မဆိုအိုင်ပီလိပ်စာကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်ကိုသင့်အားအောက်တွင်ပြပါမည်။ စက်ကို ၎င်းသည် operating system နှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်။
iOS ကိရိယာတစ်ခုတွင် IP address ကိုရယူပါ
ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်ချိတ်ဆက်သောမည်သည့်စက်ကိရိယာမဆိုကဲ့သို့ iOS operating system ရှိသည့် iPhone သို့မဟုတ် iPad များရှိအလွယ်တကူရယူနိုင်သည့်အိုင်ပီလိပ်စာရှိသည်။ ဤသို့ပြုရန်သင်သည်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာရမည်။
သင်၏ကိရိယာ၏ချိန်ညှိချက်များကို ဦး စွာရယူပြီး Connection ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် WiFi ကွန်ယက်မှအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ပါကသက်ဆိုင်သောရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ။ အခု သင်ဆက်သွယ်ထားသောကွန်ယက်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ device ၏ IP လိပ်စာကိုသိရှိနိုင်လိမ့်မည်.
Android ဖုန်းတွင် IP address ကိုရယူပါ
Android ကိရိယာတစ်ခုတွင် IP လိပ်စာတစ်ခုခုကိုအသုံးမပြုဘဲရယူခြင်းသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ ဈေးကွက်တွင်ဂူဂဲလ်ဆော့ဝဲလ်အမြောက်အများ ရှိ၍ တစ်ခုစီသည်မတူညီသောနည်းလမ်းများဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
Android 5.0 Lollipop တွင်ဥပမာ သင်လုပ်ရန်မှာသင်ဆက်သွယ်ထားသော WiFi ကွန်ယက်ကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်“ Advanced WiFi” ကိုရွေးချယ်ရန်။ သင်၏ IP address ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည့်မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေသို့ scroll လုပ်ပါ။
Android ဗားရှင်းအများစုတွင်သင်ဆက်သွယ်ထားသော WiFi ကွန်ယက်သို့မဟုတ်ဒေတာကွန်ယက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး၎င်းကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ပြသနိုင်သော်လည်းရွေးချယ်စရာများမှာများသောအားဖြင့်တွေ့ရလိမ့်မည်။
မည်သည့် IP address ကိုမဆိုသိထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းအိုင်ပီသည်မည်သည့်နေရာမှဖြစ်ကြောင်းကိုရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်သိနိုင်သည်။ ရှာဖွေရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုအဆိုပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။
မည်သည့်နိုင်ငံကမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုသိခြင်းသည်ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မည်သည့်လမ်းကြောင်းမှလာကြောင်းသို့မဟုတ်ဥပမာအားဖြင့်မတူကွဲပြားသည့်တိုက်ခိုက်မှုများမှလာသည်ကိုသိရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီနိုင်သည်။။ အမည်မသိအသုံးပြုသူများထံမှအီးမေးလ်များကိုလက်ခံသောအခါ၎င်းသည်မြေပုံပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး IP မှတစ်ဆင့်၎င်းသည်အသုံးဝင်သည်။
မည်သည့် IP မှမည်သည့်နိုင်ငံမှရှာမည်နည်းဆိုသည်မှာအလွယ်ဆုံးအချက်မှာအောက်ပါ link တွင်တွေ့ရမည့် tool ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
မည်သည့်နိုင်ငံမှအိုင်ပီသည်မည်သည့်နေရာမှသိရှိနိုင်သည်နည်းတူ၊ IP လိပ်စာတည်နေရာ၏အတိအကျတိကျသောတည်နေရာကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အလွယ်တကူအလွယ်တကူသိရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် IP၊ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်သောအသုံးပြုသူ၏မြို့၊ ပြည်နယ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအသိုင်းအဝိုင်းတို့ကိုလည်းသိနိုင်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်သင့်အတွက်အနည်းငယ်သာပုံရသည်ဆိုလျှင်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူကိုလည်းသင်သိနိုင်သည်။
ကွန်ယက်၏ကွန်ယက်၌ ရာနှင့်ချီသောအခမဲ့ပထဝီ ၀ င်တည်နေရာများ၊ ပိုမိုမြင့်မားသောသို့မဟုတ်အရည်အသွေးနိမ့်သောနေရာများရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းထောက်ခံချက်ပေးလိမ့်မည် ဒါကိုအောက်မှာတွေ့နိုင်တယ် link ကို.
ဤကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးကိုသင်အသုံးပြုလိုပါက၎င်းတို့သည်လုံးဝတိကျမှုမရှိခြင်းနှင့်အမှားအယွင်းများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းသင်သိထားရပါမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » အိုင်ပီဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်ကိုမည်သည့်ဒေတာများပေးနိုင်သနည်း။
Workspace မှလွဲ၍ Windows Desktop Blank မှထွက်ခွာခြင်း
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်သည် Google I / O 2015 မှမျှော်လင့်ထားသည့်အရာဖြစ်သည်